thinzar's blog: မပြီးဆုံးနိုင်သော
UAT - User Acceptance Test
စစချင်းတော့ UAT 1 တဲ့။ ပြီးတော့ UAT2တဲ့။ နောက် Final Acceptance Test။ အခုလာပြန်ပြီ installation and training။ အကြိမ်တိုင်း ထွက်လာတဲ့ bugs တွေ fix လုပ်ရတာ စိတ်ညစ်လာပြီ။ ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း အပြီးလုပ်ပါ ဆိုဘဲ။ တစ်ချက်လွတ်အမိန့်။ additional requirement တွေကလည်း တစ်ချိန်လုံး ထပ်ထည့်နေတယ်။ ၃ပါတ်လေးဘဲ ကျန်တာကို အလွတ်မပေးကြဘူး။
ဒါကတော့ Extreme Programming Model (XP) ရဲ့ အားနည်းချက်ပါဘဲ။ ပြီးတော့ accounting software ဆိုတော့ ကိုယ်က ဂျာနယ်၊ လယ်ဂျာ ဆိုတာတွေကို အီလည်လည်၊ customer တွေကလည်း လိုအပ်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောနိုင်တော့ ထင်သလို ရေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ပြန်ပြင်တယ်၊ ရေးပြင် ဆော့ဖ်ဝဲကြီး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
စိတ်ညစ်လာလို့ ပို့စ်ထတင်လိုက်တာ။ နောက်မှဘဲ trainee ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဧ။် ဘဝအတွေ့့အကြုံဆိုပြီး ရေးဦးမယ်။
ဒီတစ်ပါတ်တော့ ဘလော့ဂ်ကို တာ့တာ ခန လုပ်ထားပါ့မယ်။ သူတို့ခိုင်းတာတွေ ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ တနလာင်္နေ့ကြရင် presentation လုပ်ရဦးမယ်။ ရုံးကလူတွေကတစ်မျိုး၊ ကျောင်းက ဆရာမက တစ်မျိုးနဲ့၊ ရူးချင်လာပြီ။ Wish me luck!!
အားလုံအဆင်ပြေပါစေဗျာ ဆုတောင်းပါတယ် :)
29/3/07 9:43 AM
ဆုလည်းတောင်းပေး လာလည်းကူလုပ်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ :-)
29/3/07 10:21 AM
တွေ ့ရကြုံရ (1)
This kid will go far!!!
What u don't see in movie
blog အတွက် comment tracking နဲ့ recent comment widget